စုံတွဲတစ်တွဲအဖြစ် ပျော်ရွှင်ရန်သော့ချက်များ - Stylish Men | စတိုင်လ်ကျသော အမျိုးသားများ
စုံတွဲတစ်တွဲအနေနဲ့ ပျော်ရွှင်ဖို့ သော့ချက်
Alicia tomero | 29/11/2021 22:10 | စုံတွဲနှင့်လိင်
စုံတွဲအဖြစ်ဆက်ဆံရေး သူတို့မှာ ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်နဲ့ ကတိကဝတ်တွေရှိတယ်။ နှစ်အတော်ကြာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပြီး အရာအားလုံးကို လက်တွေ့ကျကျ အတူတူမျှဝေလိုက်တဲ့အခါ သူတို့ကို ထိန်းသိမ်းဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ပျော်ရွှင်ခြင်း၏သော့ချက်များ စုံတွဲတစ်တွဲအနေဖြင့် ၎င်းတို့သည် အဆုံးမရှိ ခံစားချက်များနှင့် အတွေ့အကြုံများကို ဆက်လက်ဖန်တီးနိုင်ရန် သိထားသင့်သည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Monotony နှင့် ပျင်းစရာ စုံတွဲတစ်တွဲအနေဖြင့် ၎င်းတို့သည် များစွာသောဆက်ဆံရေးပြိုကွဲရသည့် အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ ပြည်ထောင်စုကို စွန့်ခွာစရာမလိုဘဲ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေကို တဖန်ပြန်လည်ဖန်တီးတာဟာ အောင်မြင်မှုတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
1 စုံတွဲတစ်တွဲအနေနဲ့ ပျော်ရွှင်ဖို့ အကောင်းဆုံးသော့ချက်
1.1 ဆက်ဆံရေးကို အတင်းအကြပ်မလုပ်ပါနှင့်၊
1.3 အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အသက်ရှင်နေပါစေ။
1.4 တစ်ဦးချင်းစီ၏ အကျိုးစီးပွားကို လေးစားပြီး ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်ရမည်။
1.5 သင့်လက်တွဲဖော်နဲ့ တစ်ယောက်တည်းနေဖို့ အချိန်ရှာပါ။
စုံတွဲတစ်တွဲအနေနဲ့ ပျော်ရွှင်ဖို့ အကောင်းဆုံးသော့ချက်
ပြီးပြည့်စုံသော စာရွက်မရှိပါ။ ပျော်ရွှင်တဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတဲ့ သော့ချက်ကို ပေးလိုက်ပါ။ ပံ့ပိုးကူညီမှုများကို စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ရန် ကျွမ်းကျင်သော ဆက်နွယ်မှုကုထုံးများ ရှိပါသည်။ ဘာတွေ ပျက်ကွက်နေတာလဲ. ဒါပေမယ့် အောက်ဖော်ပြပါ အကြံပြုချက်အချို့ကို သင်လည်း အသုံးချနိုင်ပြီး သင့်ဆက်ဆံရေးမှာ လွဲမှားနေတဲ့အရာတွေကို သတိပြုနိုင်မှာပါ။
အဲဒါကိုသတိပြုသင့်ပါတယ် ပျော်ရွှင်မှု ဟင်းချက်နည်း တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့် တွဲနေခြင်းသည် လိမ်ညာနေခြင်းမဟုတ်သလို အခြားတစ်ယောက်ယောက်က သင်၏ဖြစ်တည်မှုကို တောက်ပစေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ ကိုယ်တွင်းမှာ တည်ရှိပေမယ့် ဖြတ်သန်းနိုင်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတွင် စွန့်စားမှု ကျေနပ်အားရမှု ပြည့်စုံပါစေ။
စုံတွဲတစ်တွဲအနေနဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ စီးဆင်းနေသင့်တယ်။ ဆက်ဆံရေးကို အလုပ်နှင့် အပေးအယူလုပ်ရန် သို့မဟုတ် တွန်းအားပေး၍ မရပါ။ blackmail. အကယ်၍ သင်တစ်ဦးသည် အခြားသူတစ်ဦးအား ပေးကမ်းရန် နှစ်သက်ပါက၊ တစ်ဖက်သားကို အလားတူလုပ်ဆောင်ရန် သင်ဖိအားမပေးနိုင်ပါ။ ပျော်ရွှင်မှုရဲ့ အမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာ ရှိနေတာဟာ အမြဲတမ်းဒီလိုဖြစ်မယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး၊ အချို့သော တွင်းပေါက်တွေကိုလည်း အခါအားလျော်စွာ ဖြည့်ပေးရပါမယ်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ခင်မင်မှု စည်းလုံးရမည်။ ပျော်ရွှင်သောဆက်ဆံရေးအတွက်။ လေးစားမှုရှိသည့်အခါ လင့်ခ်တိုင်းသည် စည်းလုံးညီညွတ်စွာ အလုပ်လုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် အကောင်းဆုံးသော့များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီလို လေးစားမှုမျိုးက တစ်ဖက်လူကို ယုံကြည်ချက်ရှိခြင်းလို့ ဆိုလိုပါတယ်။ ငါတို့ကို မလွဲမသွေ လှည့်စားမှာ မဟုတ်ဘူး၊ ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိဖို့ဖြစ်ပြီး အဲဒါအတွက် သင်လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုမှန်အောင်လုပ်နိုင်မလဲ။ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခုကို လေးစားလိုက်နာခြင်း၊ မျက်နှာမကောင်းခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခြင်းမှအစပြုခြင်း။ မကောင်းတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် မရှိဘူး။ တစ်ဖက်လူရဲ့ အားနည်းချက်ကို အသုံးချပါ။ အဲဒါတွေကို ဗုံးလို ပစ်လိုက်နိုင်လို့ ဒီနည်းနဲ့ သင်မပျော်နိုင်ပါဘူး။ သင်ဟာ အဖော်ကောင်းတွေဖြစ်ဖို့လိုပြီး စုံတွဲတစ်တွဲအနေနဲ့ မျှဝေဖို့ အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေနဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို အသုံးချနိုင်ရပါမယ်။
မင်္ဂလာမောင်နှံများ များစွာသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအသက်ရှင်ပါစေ။ အခြားသူများနှင့် အဓိပ္ပါယ်တူနိုင်သည်။ 'သမုဒယ'။ သို့သော် လူအများက ဤမီးတောက်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန် ရှုပ်ထွေးစွာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြသည်။
စုံတွဲအများအပြားသည် လမ်းပေါ်တွင် လက်တွဲသွားခြင်း၊ 'ငါမင်းကို ချစ်တယ်' လို့ မကြာခဏ မက်ဆေ့ခ်ျပို့တာ၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ကစားတာ ဒါမှမဟုတ် ပွေ့ဖက်ပေးတာမျိုး အစရှိတဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေနဲ့ အဲဒီပြည်ထောင်စုကို ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။
တစ်ဦးချင်းစီ၏ အကျိုးစီးပွားကို လေးစားပြီး ပြုစုပျိုးထောင်နိုင်ရမည်။
လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်ဝါသနာနဲ့ အရသာရှိကြပါတယ်။ တူညီသော အကျိုးစီးပွားရှိရန် မလိုအပ်ဘဲ ပြီးပြည့်စုံသော ဇနီးမောင်နှံဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်ရန် မလိုအပ်ဘဲ လက်တွေ့ကျကျ စည်းလုံးညီညွတ်မှု တည်ဆောက်ရန်၊ တူညီသောအရသာနှင့်ရည်ရွယ်ချက်။ ကွဲလွဲမှုတွေရှိရင်တောင် တစ်ဖက်လူက လုပ်ချင်တာကို လေးစားရမယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အရာအားလုံးကို အတူတူလုပ်ဖို့ ကတိကဝတ်ရှိဖို့ မလိုပါဘူး။ ဟုတ်တယ် သူတို့လုပ်နိုင်တယ်။ လင့်ခ်များနှင့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာများစွာကို ဖန်တီးပါ။ နှစ်ယောက်ကြားမှာ ခံစားမှုအသစ်တွေကို ခံစားလိုက်ပါ။
သင့်လက်တွဲဖော်နဲ့ တစ်ယောက်တည်းနေဖို့ အချိန်ရှာပါ။
သင့်တွင် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့် ကလေးများရှိသည့်အခါ ဤအချက်အလက်သည် ရှုပ်ထွေးပုံရသည်။ မိသားစုတစ်ခု၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မိဘများနှင့် သားသမီးများကဲ့သို့ အခိုက်အတန့်တိုင်းကို အမြဲမျှဝေရန်မဟုတ်ပါ။ အခိုက်အတန့်တွေကို ရှာကြည့်ရတာ ကျန်းမာတယ်။ စုံတွဲတွေချည်းပဲ အနှောင့်အယှက်မရှိဘဲ မျှဝေလိုက်ပါ။. အဲဒါကို မင်းရဲ့ အရာအားလုံးကို ပေးနိုင်ဖို့၊ အနားယူပြီး ရင်းနှီးမှုကို ဖန်တီးရတာနဲ့ ပတ်သက်တယ်။
ငါဖြစ်​​နေတယ်​လို့ထင်​​ပေမယ့်​ ပြည့်​စုံရမယ်​၊ ဒါလည်း​ကောင်းတယ်​ သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းပါ။. ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးသည် ဤရည်ရွယ်ချက်နှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအပြင်ဘက်တွင် ပြုလုပ်လိုသည့် ကျန်းမာသောလုပ်ဆောင်မှုမှန်သမျှကို လေးစားလိုက်နာရမည်ဖြစ်ပြီး၊ နောက်ဆုံးတွင် စိတ်ကျန်းမာရေးဖြစ်မည်ဖြစ်သည်။
ရှိလေရာ ကွဲလွဲမှုများ စုံတွဲတစ်တွဲကြား သူတို့ကို စကားမပြောဘဲ နှုတ်ဆိတ်နေရမယ်။ ၎င်းတို့ကို ကယ်တင်ခြင်းခံရပါက၊ ၎င်းသည် နောက်ဆုံးတွင် အလွန်ကြီးမားသောအစုအဝေးတစ်ခုအဖြစ် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး တိတ်ဆိတ်နေသည့်အရာအားလုံးကို လွယ်ကူစွာ ဆွေးနွေးရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးသည် မည်သည့်ဆက်ဆံရေး၏အခြေခံဖြစ်သည်၊ အရာရာတိုင်းသည် အချေအတင်ဖြစ်နိုင်သော်လည်း လေးစားမှုမှဖြစ်သည်။
ကျန်းမာတဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအတွက် အရေးကြီးတယ်။ ခံစားချက်တွေကို ဖော်ပြပါ။ ထိခိုက်မှုမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုညှိနှိုင်းရမလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးပါ။ ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ပေးဖို့ကြိုးစားပါ။ သဘောတူညီချက်တစ်ခုရယူပါ။ သဘောတူညီချက်တစ်ခုရရင် ရှိကိုရှိရမယ်လို့ နားလည်ထားရမယ်။ ရည်ရွယ်ချက် ချိန်ခွင်လျှာ နှစ်ခုလုံးကြား။ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် အခြားတစ်ယောက်ထက် အမြဲပို၍ မပေးနိုင်သည့်အပြင် ၎င်းသည် လင်မယားကြားရှိ ငြင်းခုံမှုများစွာထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အပြန်အလှန်နားလည်မှုဆိုတာ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ စုံတွဲတစ်တွဲရဲ့ အခြေခံတစ်ခုပါပဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » fit » စုံတွဲနှင့်လိင် » စုံတွဲတစ်တွဲအနေနဲ့ ပျော်ရွှင်ဖို့ သော့ချက်